Tuesday April 23, 2019 - 19:57:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya dhulka Xarameynka ee Sacuudiga loo yaqaan ayaa sheegaya in ladilay illaa 37 qof kuwaas oo dhammaantood heystay Jinsiyadda Aala Sacuud.
Bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga oo ay faafisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Nidaamka Sacuudiga ayaa lagu sheegay in dadka ladilay lagu fuliyay xukunno dilal ah oo ay ku sheegtay Tacziir iyo Xaddul Xiraabah.
Dowladda Sacuudiga ayaa ku eedaysay dadka ay dishay in ay aaminsanaayeen Fikir ay ku sifaysay Xagjirnimo iyo Argagaxisanimo islamarkaana ay dowladda ka faafinayeen Ishaacaad io Fowdo arrinkaas oo dad badan ay layaabeen.
Falalkan daldalaadda ah ayaa ka dhacay magaalooyinka Riyaad, Alqasiim,Casiir iyo labada magaalo ee Barakaysan oo kala ah Makka Al Mukarrama iyo Madiina Al Munawarah.
Falkan ay ku dhaqaaqday Xukuumadda Sacuudiga ayaa sare uqaadaya dilalka ay ugeysanayso dadka siyaasadda Max'med Bin Salmaan khilaafsan, Hay'adaha sheegta in ay udoodaan xuquuqul Insaanka waxay xaqiijiyeen in Afar bilood gudahood dowladda Sacuudiga ay xukunno daldalaad ah ku fulisay illaa 80 qof